Brazil oo ka cafinaysa Afrika - BBC Somali - Ganacsi
Brazil oo ka cafinaysa Afrika
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 26 Mey, 2013, 15:58 GMT 18:58 SGA
Madaxweynaha Brazil Dilma Rousseff oo ka hadlaysa shirka Midowga Afrika.
Dowladda Brazil, ayaa ku dhawaaqday inay cafinays ama waqtiga u dheeraynayso bixinteeda ku dhawaad sagaal boqol oo milyan oo dollar oo ay amaahisay Dalalka Afrika, si ay u xoojiso xiriirka dhaqaale ee Qaarada.
Laba iyo tobanka dal ee ka faaidaysanaya waxaa kamid ah Congo-Brazzaville oo ay Brazil ku leedahay amaahda ugu badan oo dhan 350 milyan oo dollar, Tanzania iyo Zambia.
Ganacsiga Brazil ay la leedahay Afrika ayaa shan jibaarmay tobankii sano ee la soo dhaafay, wuxuuna gaaray in kabadan labaatan iyolix bilyan oo dollar 2012kii.
hadalkan ayay ka sheegtay madaxweynaha Brazil Dilma Rousseff, oo ka qaybgalaysay shirka Midowga Afrika ee ka dhacaya Addisababa.